डोजरले सडक खनेर श्रमिकका नाममा बिलः एकवर्षे बालकलाई एक महीना काम लगाएर रु.१७ हजार भुक्तानी ! « Post Khabar
डोजरले सडक खनेर श्रमिकका नाममा बिलः एकवर्षे बालकलाई एक महीना काम लगाएर रु.१७ हजार भुक्तानी !
Published on: 8 June, 2020 4:42 pm
भुवनबहादुर सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र
बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा छडाखेत–मालिका–दाँतोला सडक खन्ने निर्णय ग¥यो । यो कामका लागि जोगगिरी बिष्टको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरियो ।
बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाको धमेना–ढुङ्गाना सडक निर्माणमा परिचालन गरिएको डोजर । तस्वीरहरूः भुवनबहादुर सिंह
यो मामिलाका जानकार एक व्यवसायी भन्छन्, “यस्तो नक्कली कामबाट जनप्रतिनिधि र डोजर संचालक दुवैलाई फाइदा हुन्छ । एकातिर ठूलो नाफा, अर्कोतिर उपभोक्ता समितिले काम गरेको देखिने हुनाले व्यवसायीले कारोबार र आयमा कर समेत तिर्नुपर्दैन भने जनप्रतिनिधिले विकास गरेको देखाएर कमिशन खान पाउँछन् ।” खोज पत्रकारिता केन्द्र बाट साभार्
(आसिसबहादुर सिंहको सहयोगमा )